Wilson-Kindelan School | Boston School Finder
Gaar looleeyahayK2 - 4aad
158 Blue Hills Pkwy, Mattapan
Dugsiga Kahor 7:00am-8:30am
Dugsiga Kadib 3:00pm-5:30pm
Waxaan hadda aqbalaynaa codsiyada ardayda jira 5 ama gaaraaya 5 sano bisha Diseembar 31, 2019 fasalada Dayrta 2019 ee barbaarinta
Waxaan hadda aqbalaynaa codsiyo kooban ardayda jira 6 ama gaaraaya 6 sano bisha Diseembar 31, 2019 fasalada Dayrta 2019 ee Fasalka koobaad.
Qoysaska waxaa lagu dhiirigalinayaa inay codsadaan booqasho iyo waraysi ay dugsiga layeeshaan sida ugu dhakhsaha badan.
Dhagsii Diiwanagalinta Booqashada dugsiga ee hoose si aad uqabsato balanta booqashada.
Waxaan si gaar ah ula shaqaynaa qoysaska si aan u go'aamino hadii dugsiga Wilson-Kindelan yahay “Mid Kuhaboon”. Dhamaan qoysaska xiisaynaaya helitaanka macluumaad dheeri ah oo kusaabsan dugsiga waa inay iskaqoraan boqashada dugsiga si aan go'aan uga gaarno arintaas. Xafiiska dugsigeenu wuxuu si dhaw ula shaqeeyaa Dugsiyada Dhexde ee Madaxa banaan wixii laxariira diiwaangalinada.
HAL ABUUR LEH. GAAR AH. MADAX BANAAN.
Cunug kasta wuxuu raacaa wado waxbarasho oo gaar ah. Hadaan nahay Wilson-Kindelan waxaan xoojinaa cunug kasta si uu uhelo shaqsiyadiisa ugu saraysa anagoo siinayna hanaan waxbarasho oo shaqsiyan diirada usaaraaya. Naqshad kasta oo waxbarasho waa ladhawraa waana laga faaiidaystaa; farxad kasta waa labixiyaa.
Diiradeena gaarka ah ayaa raacaysa Qaabka Wilson-Kindelan Method (WKM), taasoo kudhisan Fikirka Howard Gardner ee Caqliyada. Qaabkeenu wuxuu keenaa fikradaan mid nolosha kudhisan asagoo kobcinaaya caqliyadaha kaladuwan ee cunuga:
Dhaqanka dugsigena ayaa leh kaladuwanaansho anagoo aqoonsanayna in tani kenayso dulqaad dheeri ah iyo wada shaqayn badan oo muwaadiniinta dhexmarta. Waxaan kudadaalaynaa bixinta deeqo waxbarasho oo oo balaaran si aan fursadaha waxbarashada ugaarsiino dhamaan ardayda kunool Boston anagoon kafiirinayn xaaladahooda dhaqaale.
Fasalo arday tiro yar kujiraan (7-10 arday ayaa kujirta fasalkiiba)
Casharo Gaar ah
Casharada Suzuki Piano
Yoga maalin kasta iyo barshada Dhexdhexaadinta
Kobaca bulshada iyo Dareenka
STEM xoogan, Manhajka Akhriska, iyo Cilmiga bulshada
Casharada luuqada Luqadda Isbaanishka
Barnaamijyo ayaan kusamaynaa Xarunta Dabiiciyada ee Boston
Dugsiga Wilson-Kindelan School waa dugs LACAG la'aan ah oo ay dhigtaan qoysaska buuxsha Jaangoynta Dhaqaalaha ee Federaalka. Qoysaska aan uqalmin jaangoynadaas waxaa lasiin doonaa deeq waxbarasho oo kusalaysan dakhliga qoyska (inta badan qoysasku waxay baxshaan inta udhaxaysa $4,000-$10,000). Qarashka alaabta ee magacoowga ayaa laga doonayaa dhamaan ardayda.
Keenis hore oo wadata ciyaar aan nidaamsanayn
Ciyaar furan, Jees, caawimaada layli guriga, nashaadaad diyaarsan marka lacodsado.
Shaar raaxo ah oo poolo ah oo kala jiidmaaya/Darees wata funaanad dhaxameed/leggings